Orodyahan Maxmed Farax iyo tababarihiisa oo is macsalaameeyay - BBC News Somali
Mo Farah oo afar jeer oo hore ku guulaystay Oradka Olambikada ayay is macsalaameeyeen tababarihiisii Alberto Salazar, wuxuuna dib ugu laaban doonaa Britain.
Faarax oo ku guulaystay biladda dahabka ah ee 5,000 ee mitir iyo 10,000 ee mitir, tartankii Olambikada ee lagu qabtay London iyo kii kale ee lagu qabtay magaalada Rio ee dalka Brazil sannadkii 2016kii, ayaa sheegay in go'aankiisu uu salka ku hayo in uu rabo in uu London ku laabto.
Tababare Salazar waxaa baaritaan ku haya hay'adda la dagaalanta dawooyinka jirka xoojiya ee mamnuuca ah ee dalka Maraykanka oo magaceeda loo soo gaabiyo (Usada) ka dib markii barnaamijka BBC-da ee Panorama uu soo jeediyay eedaymo isticmaal daroogo oo ka dhacay xarun tababar oo Maraykanka ku taalla.
Mo Farax oo 34 jir ah ayaa yiri "London ayaan dib ugu laabanayaa. Xaqiiqadiina aad ayaan ugu xiisay".
Hadda waxaa tababari doona Gary Lough, oo horay u soo tababaray Mo, xaaskiisuna ay tahay Paula Radcliffe oo haysata rikoorka oradka maradonka dumarka.
Salazar ayaa la sheegay in loo soo bandhigay in uu lataliye u sii ahaado Maxamed Faarax.
"Baadhitaannada dawooyinka jirka xoojiya ee mamnuuca ah kama tagayo" haddaba Maxamed Muxuu u laabanayaa?
Maxamed waxaa tan iyo 2011kii tababarayay Salazar oo reer Cuba ah laakiin dhalashada Maraykanka haysta.
Salazar iyo Maxamed-ba way diideen in ay marnaba jabiyeen shuruucda ka taalla adeegsiga dawooyinka awooda jirka kordhiya ee la mamnuucay.
"Waxaan rumaysanahay tartan nadiif ah, waxaana aad u aaminsanahay in la ciqaabo qof kaste oo jabiya shuruucda" ayuu Maxamed ku yiri wargeyska Sun.
Mo Faarax oo markale guulaystay
Mo Farah oo dhaliilay amarka Trump
Tababarahayga iyo goobtii aan ku tababaran jiray ee Nike Oregon Project oogama tagayo, baaritaannada la wado.
"Baaritaankan labo sano ayuu socday, haddii aan isaga ka tagayana mar hore ayaan ka tagi lahaa.
"Wuxuu intaas ku daray sababta aan u tagayo waxay tahay aniga iyo qoyskayga London ayaan dib ugu laabanaynaa, xagaaga in aan halkan ku qaadano ayaan jecelnahay, aniga iyo xaaskayga Tania waxaan garwaaqsanay sida aan ugu xiisnay in aan wakhti la qaadano asxaabta iyo qaraabada, carruurtuna halkan aad bay ugu faraxsan yihiin.
Waxaan doonaynaa in carruurtanadu ay ku korto UK, waana sida saxda ah ee ay tahay in aan qoyskayga u sameeyo.